Ugboro ole ka taya ụgbọ ala na-agbanwe? News -NingBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Ugboro ole ka taya ụgbọ ala na-agbanwe?
Oge: 2020-08-27 Hits: 44
Enwere ike iwere taya dịka otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ụgbọ ala. Ọ bụghị naanị na ọ bụ naanị maka ịnya ụgbọ ahụ, kamakwa ọ na-ebu ibu dị n'ụgbọ ahụ. Taya bụ otu n’ime akụkụ ndị kachasị eyi na ụgbọ ala. Na mgbakwunye, Na otu aka, na taya na-metụtara anyị mma ịnya ụgbọ ala, anyị ekwesịghị ịkpachara anya. Yabụ kedu ka taya ụgbọ ala si agbanwe agbanwe? Ogologo oge ole ka enwere ike iji taya ụgbọ ala?
Mgbanwe taya nkịtị: A na-eji taya ahụ eme ihe dị ka ngwaahịa roba, oge iji ya agaghị agafe afọ ise. Ọbụlagodi na ejighị ya, enwere ike ọ gaghị abawanye ruo ogologo oge. N'ihi na a ga-eme ka roba kpụ ọkụ n'ọnụ mgbe ekpughere ya na ikuku, ihe rọba ahụ ga-eji nke nta nke nta sie ike n'oge a. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-emetụta Mbelata njide nke taya ahụ. N'ezie, ogologo ndụ ọrụ taya ahụ agaghị agafe afọ ise. Maka ụbọchị mmepụta nke taya, ọtụtụ n'ime ya ga-akara na sidewall, ọ bụrụhaala na ọ na-enyocha site nyocha dị mfe.
Mgbanwe taya na-adịghị mma: Ọ bụrụ na taya gị enwebeghị nsogbu na usoro ojiji, enwere ike iji ya mee ihe ruo afọ ise, mana ọ nwere ike ịga n'ihu na-eji ya ma ọ bụrụ na ọ mebiri emebi ma ọ bụ aza? N'ezie, nke a agaghị ekwe omume. Were mgbidi mgbidi ahụ dị ka ihe atụ. Ọtụtụ taya na-ebute site na ngọngọ nke ply. Nke a bụ akụkụ bụ isi nke ịkwado nrụgide mpụga. Mgbe ihe egwu ahụ gasịrị, ọ pụtara na taya nke taya arụmọrụ nke mgbidi ahụ belatara nke ukwuu. Ọ bụrụ na agbanyeghị ya ozugbo, ọ nwere ike ime na taya dara ada ga-eme n’ụbọchị. Mgbe onye nrụzi na-agwa gị na akụkụ ime ime ahụ emebiwo, emezie ka ịla azụ dochie taya ahụ ozugbo.
Ogologo oge ole ka taya ụgbọ ala ga-ewe?
Echeghị m na e nwere ezi ụbọchị na kpọmkwem nnọchi ụbọchị maka taya. N'ihi ụdị taya dị iche iche nke onye ọ bụla na-emepụta rụpụtara, ọnọdụ onye nwe ụgbọ ala ọ bụla abụchaghị otu. Nke a ga-emetụta ụbọchị dị iche iche na-anọchi anya ya, yabụ ise Ogologo afọ ahụ bụ n'ezie iji hụ na ịnya ụgbọ ala nke ọtụtụ ndị nwe ụgbọ ala. Fọdụ ndị mmadụ nwere ike iche na taya ndị ha na-eji eme ihe nwere ike ịnagide oge ma nwee ike ịgbatị oge ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, mana n'eziokwu, ndụ ọrụ nke taya ahụ abụghị naanị metụtara ogo taya. O yikwara na ọnọdụ okporo ụzọ, Ọ bụrụ na ụgbọ ala gị na-eme njem mgbe niile n'okporo ụzọ dị egwu b ọ ka ga-adị mma ka ị jiri taya gị naanị afọ ise.
Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ taya nke taya ndị dị ugbu a nwere akara nwere akụkụ atọ, nke na-anọchi anya akara ejiji taya, nke bụkwa oke mfu nke taya ahụ nwere ike ịnakwere. Ọnwụ vibration karịrị akara a. Aka ahụ na-ebelata nke ukwuu, ọkachasị na mmiri ozuzo na snow, yabụ ọ bụrụ na etinyere ụdị taya ahụ na njedebe, a ga-edochi ya, akara akara a na ndụ nke taya ahụ.
Previous: Otu esi amata taya edeghachitere
Ọzọ: Ntuziaka maka ịhazi ihe ngosi ntanetị na 127th Canton Fair